Fifidianana ho filoham-pirenena : 10 tapitrisa latsaka kely ireo mpifidy -
AccueilSongandinaFifidianana ho filoham-pirenena : 10 tapitrisa latsaka kely ireo mpifidy
Fifidianana ho filoham-pirenena : 10 tapitrisa latsaka kely ireo mpifidy
Miisa 9 913 599 ireo mpifidy tafiditra anatin’ny lisitra, amin’ny fifidianana fihodinana voalohany ny 7 novambra ho avy izao. Io no isa ofisialy navoakan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, taorian’ ny fanamarinana sy fampidirana ireo anarana latsaka anatin’ny lisitra. Mahatratra 24 852 kosa ny isan’ny biraom-pifidianana manerana an’i Madagasikara, araka ny tapaky ny fivoriamben’ny CENI ny talata lasa teo. Tsy maintsy nisy ny fandinihana lalina natao mikasika ny biraom-pifidianana hoy ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo, satria nodinihina ny voalazan’ny lalàna fa “700 ihany no mpifidy anatina biraom-pandatsaham-bato iray”. Nodinihina ihany koa ny fangatahana miisa 729 nataon’ny kaomina sy ny fokontany, hamoronana biraom-pifidianana vaovao. Saingy ireo izay hahitana mpifidy mihoatra ny 100 ihany no nekena.
Ankoatra ireo tarehimarika ireo, dia nitondran’ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo fanazavana, ny vola hampiasaina amin’ ny fifidianana. Nambarany fa “efa feno ny vola ampiasaina hanatanterahana ny fifidianana, ary tsy misy ny tebiteby raha resa-bola no jerena”. “65 Miliara Ariary ny vola hanomanana ny fifidianana ho filoham-pirenena, vola izay avy amin’ny fitondram-panjakana malagasy io. Mahatratra 15 Miliara Dolara kosa ny vola avy amin’ ny fiaraha-miombon’antoka, anatin’ ny tahirim-bola SACEM. Ny 1,2 Tapitrisa Dolara sisa no mbola hotadiavina, efa anatin’ny kitapom-bola kosa izany ny 13,8 Tapitrisa Dolara” hoy ny fanazavany.
Mizotra araka ny nieritreretana kosa ny tetiandrom-pifidianana hoy i Thierry. Efa mandeha ny fanontana ny bileta tokana, ilaina amin’ ny fanentanana sy fampianarana ny mpifidy. Ny voalohan’ny volana novambra kosa no atonta any Afrika Atsimo ihany ny bileta ampiasaina mandritra ny fifidianana 7 novambra. Mikasika ny voka-pifidianana, dia daty roa no nomen’ny CENI. Daty voalohany hivoahan’ny voka-pifidianana fihodinana voalohany, ny 28 novambra 2018 farafahatarany. Raha toa kosa tsy misy mahazo ny antsasa-manila ny 50%, dia miroso amin’ ny fihodinana faharoa ny 19 desambra isika. Ny faha- 9 ny volana Janoary 2019 kosa, farafahatarany ny voka-pifidianana ofisialy.
Fananan-tany : Fanohanana 15 tapitrisa Dolara avy amin’ny banky Iraisam-pirenena